Loollanka La Liga, kulammada u harsan Atletico Madrid, Real Madrid iyo Barcelona, kooxda heysata fursadda ugu wanaagsan & wax walba oo aad uga baahan tahay dhammaadka horyaalka Spain – Gool FM
Ahmed Nur April 26, 2021
(Spain) 26 Abriil 2021. Horyaalka dalka Spain ayaa u muuqda kan ugu adag in la saadaaliyo halka uu ku dhammaan doonoo xilli ciyaareedkan, maadaama saddex naadi ay ku hardamayaan hanashadiisa sidoo kalena saddex dhibcood ay kala qaybiso afarta kaalin ee ugu sarreysa.
Kooxaha Atletico Madrid iyo Real Madrid ayaa min 33 kulan ciyaaray horyaalka, waxaana Barcelona ay heysataa kulan baaqi ah oo ay Khamiista la ciyaari doonto naadiga Granada.
Waxaa sidoo kale tirada lagu dari karaa naadiga Sevilla oo xitaa qudheeda hannan karta La Liga maadaama ay saddex dhibcood oo qura u jiraan hoggaanka horyaalka La Liga.
Loollanka La Liga
Dhammaan afarta koox ee ugu sarreysa horyaalka ayaa ku guuleysan kara horyaalka La Liga, hase ahaatee, waxay saadaasha u badan tahay saddexda sare kuwaasoo saddex natiijo oo kala duwan ka helay kulammadii asbuuc-bilawgan.
Real Madrid ayaa barbarro goolal la’aan ah la gashay Real Betis, halka Barcelona ay guul ka gaartay Villarreal, waxaana Atletico Madrid ay guuldarro kala kulantay Athletico Bilbao.
Natiijooyinkaas waxay horyaalka ka dhigeen mid xiisahiisa uu sii kordhay maadaama Atletico ay qarka u saaran tahay inay lumiso hoggaanka La Liga mar kale.
Sevilla ayaa sidoo kale tirada musharraxiinta horyaalka ku jirta maadaama ay saddex dhibcood oo qura ka dambeyso kooxda hoggaanka heysa, waxayna heli karta fursad ay hoggaanka ku qabtaan haddii saddexda naadi ee ka sarreeya wada guuldarreystaan hal mar.
Dhanka kala sarreynta dhibcaha, Kooxda Macallin Diego Simeone ayaa leh 73 dhibcoodm halka kooxaha Blaugrana iyo Los Blancos ay wada leeyihiin min 71 dhibcood, Sevilla ayaa iyaduna leh 70 dhibcood.
kooxda heysata fursadda ugu wanaagsan
Maadaama min 33 kulan ay ciyaareen kooxaha Madrid ka wada dhisan, waxay kulan ciyaaris ka badan yihiin Barcelona oo kulan baaqi ah gacanta ku heysata.
Sida caadiga ah, marwalba kooxda kursiga koowaad fadhisa ayaa ah tan ugu cad cad haddii ay kulammada la ciyaaray ay isku mid yihiin, waxaana Barca ay heysataa fursad wanaagsan haddii ay habeenka Khamiista ka adkaato naadiga Granada, taasoo la micno ah inay hoggaanka ku qaban doonaan hal dhibic oo ay ka sarreyn doonaan kooxda Atletico Madrid.
Barca ayaa sidoo kale heysata fursad wanaagsan haddii ay wada guuleysato kulammada u harsan oo dhanna waxay noqon doontaa kooxda loo caleemo saaro hanashada La Liga fasal ciyaareedkan.
Haddii aysan taasi dhicin oo ay Barca guuleysan weyso kulankeeda Khamiista, Atletico ayaa sii ahaaneysa kooxda ugu cad cad hanashada La Liga.
Dhinaca kale, Real Madrid ayaa heysata fursad kale oo wanaagsan, maadaama labada la tartammeysa uu u harsan yahay kulan ay is arki doonaan kaasoo Camp Nou ka dhici doona, waxaana halkaas ka bannaan in kooxi ay dhibco lumin doonto, fusadna u noqon doonto kooxda Macallin Zidane inay markeeda hoggaanka la wareegto, walow qudheedu ay wajihi doonto Sevilla kulanka soo socda kan xiga.
Sevilla oo aysan dadka falanqeeya kubadda cagta Spain u arkin koox ku guuleysan karta horyaalka ayaa heysata fursad ka yar saddexda naadi ee kale, waxaana ay hoggaanka La Liga heli kartaa haddii Barca lumiso dhibco labo ka mid ah kulammada u harsan, kooxaha Madrid ka dhisanna ay dhibco lumiyaan balse ay iyadu guuleysato kulammada u harsan oo dhammi, sidaas darteed, fursaddeedu ma buurna.
kulammada u harsan Atletico Madrid, Real Madrid, Barcelona iyo Sevilla
Kulammada uu ku hor qoran yahay xarfaka G waa kulammada ay kooxaha gurigooda ku ciyaarayaan, halka kuwa xarafka B uu ku hor qoran yahay ay ka dhigan tahay in bannaanka ay kusoo ciyaarayaan (G=Guri, B=Bannaan)
Athletic Club (B)
Atlético Madrid (G)
Celta Vigo (G)
Real Sociedad (G)
Athletic Club (G)
Miyuu Toni Kroos u ciyaari doonaa Real Madrid kulanka Champions League ee ay la balansan yihiin Chelsea?